” အချိန် ” အခေါ်အဝေါ်လေးများး « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
Bookmark the permalink.	” အချိန် ” အခေါ်အဝေါ်လေးများး
by ချစ်သူအတွက်	ဒါလေးကတော့ တော်တော် ကောင်းပါတယ်….သိလဲ သိသင့်ပါတယ်…..အမှန်တကယ် ကျွန်တော်လဲ မသိခဲ့ပါဘူးး……. ဒီစာလေးကို ဖတ်မိလို့ သိခဲ့ရတာပါ..စာရေးတဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……
ကျွန်တော်လဲ ဒီစာလေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါ ..
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ အတွက် ပြန်လည်ဗဟုသုတ ပေးနိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်….မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာ” အချိန် “အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကတော့……………………
(၁) ရောင်နီပေါ် (နံနက် )………….၄း၃၀
(၂) အာရုဏ်တက် ( နံနက် )…………၅း၀၀
(၃) ဝေလီဝေလင်း ( နံနက် )………….၅း၁၀
(၄) ကျီးမနိုး/တနိုး ( နံနက် ) ………….၅း၂၀
(၅) လင်းအားကြီး ( နံနက် )…………..၅း၃၀
(၆) နေထွက်တမြူ ( နံနက် )………….၅း၄၀
(၇) မိုးစင်စင်လင်း ( နံနက် )………….၆း၀၀
(၈) နေထန်းတဖျား (နံနက် )…………..၉း၀၀
(၉) ဆွမ်းခံပြန်ချိန် (နံနက် )……………၉း၃၀
(၁၀) ဆွမ်းစားချိန် ( နံနက် )…………..၁၀း၃၀
(၁၁) နေမွန်းလတ် ( နံနက် )…………..၁၁း၀၀
(၁၂) နေမွန်းတဲ့ ( နံနက် )…………..၁၂း၀၀
(၁၃) နေမွန်းလွဲ ( နေ့လည် )………..၁၃း၀၀
(၁၄) ညနေစောင်း ( ညနေ )……………၁၅း၃၀
(၁၅) ညနေအေး ( ညနေ )……………၁၆း၃၀
(၁၆) နေ၀င်ဆည်းဆာ( ညနေ )…………..၁၇း၀၀
(၁၇) နေ၀င်ဖျိုးဖျ ( ညနေ )…………..၁၇း၂၀
(၁၈) နွားရိုင်းသွင်းချိန်( ညနေ )……………၁၇း၄၀
(၁၉) ညီအကိုမသိတသိ( ညနေ )………….၁၇း၅၀
(၂၀) နေ၀င်မိုးချုပ် ( ညနေ )…………….၁၈း၀၀
(၂၁) ညချမ်း ( ညနေ )…………….၁၈း၃၀
(၂၂) သူငယ်အိပ်ချိန် ( ည )………………၁၉း၃၀
(၂၃) သက်ကြီးခေါင်းချချိန်( ည )………….၂၁း၃၀
(၂၄) ညဦးကြက်တွန်ချိန် ( ည )………….၂၂း၃၀
(၂၅) သန်းခေါင်ကြက်တွန်ချိန( ည )………၂၄း၀၀
(၂၆) ကြက်အမြီးထောင်ချိန် ( ည )………..၀၀း၀၀
(၂၇) ကြက်ဦးတွန်ချိန် ( နံနက် )………….၃း၃၀
(၂၈) လင်းကြက်တွန်ချိန်( နံနက် )………….၄း၀၀ ******* ဗဟုသုတများ တိုးပွားနိုင်ပါစေ *********
” ဖိုးသားလေး ” 0.000000
← မေတ္တာ သံယောဇဉ်